Magaalo Sacuudiga ka mid ah oo dhalinayarro aan soomaneyn ay heeso ku qaadayaan Wadooyinka | Xaqiiqonews
Magaalo Sacuudiga ka mid ah oo dhalinayarro aan soomaneyn ay heeso ku qaadayaan Wadooyinka
Magaalada daa,if oo ku dhaw Makka al mukaramah ayaa waxaa Ciidmada amaanka sacuudiga ay qabqabteen rag dhalin yarro ah oo kor u dhaafay 54 qof oo caadeystay in aysan soomin iyagoo waliba intaasi ku sii daray in ay dibadda u soo baxaan maalinta cad iyagoo heeso ku ciyaaraayo.
ciidanka amniga ayaa raggani ku eedeeeyey dhowr arimood oo lid ku ah shareecada islaamka sida in aysan soomeynin iyo waliba in maalinta cad dadka oo sooman in ay iskugu soo baxaan goobaha dalxiiska iyagoo ku ciyaaro heeso.
Sidoo kale raggani aya lagu eedeeyey in ay xirtaan dhar aan xishood laheyn iyagoo sidoo kale timaha u gaabsada qaabka galbeedka arintaasi oo ka dhan ah Aadaabta guud.
bilowgii ramadaankani waxaa dhalinyarro badan oo ku nool daa,if ay iclaamiyeen in aysan soomeynin bishani arintaasi oo ugub ku ah sacuudiga.
Dowladda sacuudiga ayaa leh ciidan gaar ah oo la tacaamula dadka ku dhaqaaqa falalka lidka ku ah shareecada islaamka balse sanadihii u danbeeyey waxaa jiray gaabis ku yimid shaqadii ciidankani ka dib cadaadis xoog leh oo dowladda dhagaha Nugul ee sacuudiga kaga yimid wadamada galbeedka iyo hay,adaha xaquuqda aadanaha.